Akusiyo imfihlo ukuthi izimoto ka production ezifuywayo, kuhlanganise 14 "Lada", ifakwe izinjini yini enamandla kakhulu. Ngakho-ke, abashayeli bazama ngazo zonke izindlela ukuba umthamo umngane walo yensimbi. Ukuze embule amakhono agcwele injini kaphethiloli, udinga ukwandisa umthamo isilinda, okusho proforsirovat motor. Kodwa wengeze "amahhashi" kungaba ngezinye izindlela. Indlela yokwenza injini Tuning Vaz-2114, bheka kamuva kulesi sihloko.
Nyusa ivolumu zokusebenza uMbhalo
Kuyinto kungase kutholakale kakhulu futhi enokwethenjelwa indlela yokuthuthukisa izici Dynamics ukusheshisa kwanoma iyiphi imoto. Ingqikithi yalo amandla motor umsebenzi silula - wena nje kufanele wazalela piston kahle, shintsha le ezininginingi eyanele futhi ushintshe crankshaft. Nokho, ukwenza lokhu, ngeshwa, akukwazi ngaphandle ekhethekile umshini amathuluzi kanye namakhono ngaphezulu. Piston wazala at high imishini ubuchwepheshe ngesisekelo ukubala eqondile kanye osayizi ukuhambisana. Uma into ngeke amamilimitha angu Whittle kude okungenani ezimbalwa ukusebenza okuningi kusuka umfutho ezinjalo ngeke isakwazi kulindeleke. imishini ezinjalo kuphela studios professional, ngakho zabo ezandleni injini Tuning Vaz-2114 ukuze ukwazi ukuzenza.
Ngesikhathi ezikhethekile uphethiloli master ngokushesha uthatha efaneleka kakhulu crankshaft (okusezingeni eliphezulu noma ukukhanya), uzofaka omunye esikhundleni sakhe futhi zihlakazeke kwesokudla injini pistons. Ngesikhathi umfutho injini nqubo ithatha cishe usuku olulodwa. Ngokombono zezimali umbono, kufanele uchithe okungenani $ 500 ku "motor efika engqondweni lapho uzwa". Ngenxa yobukhulu esincishisiwe le pistons futhi ushintshe ezininginingi engayitholi ukwandisa amandla injini cishe 1.5 izikhathi. Okungukuthi, esikhundleni elidala 90-amahhashi esinalo 135. nje Kodwa petrol akuyona ukonga - ngokwesilinganiso, ke kuzokwanda 2-3 amalitha.
Alternative izindlela intuthuko motor
Abanye abashayeli ukwenza ukulungisa (Tuning) Vaz-2114 i-motor ngokuzimela. Kulokhu, zonke pistons futhi crankshaft bunjalo. Pho-ke, amandla injini ngaphandle boring amasilinda zingandiswa? Indlela elula - iwukuba esikhundleni njalo lemifanekiso air. Ngenxa yalokho, amandla injini luyanda mayelana 5-8 amaphesenti. petrol cishe ukhulise. Kanye lemifanekiso, abashayeli namanje batusa ekushintsheni inhlansi abasebenzi phezulu.
Ukuze kwandiswe isibalo esiphezulu linemibhikisho we crankshaft (futhi ngendlela efanele, futhi amandla) ku amasilinda ziyasuswa sherhovatosti. Nokho proshlifovyvayutsya futhi itheku iziteshi nabo.
Enye indlela ukuba uthuthukise steel vazovskaya injini ungakwazi ngcono uhlelo ukuthungela wokusabalalisa. Kulokhu, lo yangaphakathi omlilo injini ukukhwezwa valve engasindi futhi abalandeli abasha.
Futhi indlela ephumelela kakhulu ukwandisa injini ukusebenza. Njengoba umkhuba ubonisa, ngemva ukufakwa umshini iba turbocharger namandla kakhulu okungenani 25-30 phesenti (okungukuthi, kwacishe kwaba sengathi wazalela isilinda). Nokho, ngesikhathi esifanayo kufanele kuphawulwe ukuthi Tuning enjalo yenjini Vaz-2114 imayelana nani umthwalo ezengeziwe ku ukudluliswa. Khumbula ukuthi torque ICE akufanele kube ngaphezu kuka ukudluliswa ukugeleza torque engu.
Alternative - chip Tuning
Njengasendabeni yabase sokuphoqa, indlela ukwandisa amandla injini asikwazi ukwenziwa ngaphandle nemishini ekhethekile. Nokho, alisetshenziswa nhlobo imishini, kanye ne-software computer. Eqinisweni, into eyinhloko izinguquko lapha kuba electronic control unit, okuyinto ngenxa yomsebenzi reflash "ubuchopho".
Empeleni, ukuphambanisa izinhlamvu injini chip silungisa Vaz-2114 - is reprogrammed esebenza nge-computer yangaphakathi omlilo control injini uhlelo. Kumele kuqashelwe ukuthi "agqoke" kukhona izinketho eziningi kangaka. Ngokwesibonelo, uhlelo eyodwa ilungiselela block ngaphansi ngokulinganisela petrol (ngezithukuthuku ukusheshisa Dynamics), kanti eyesibili, kunalokho, kwandisa amandla zalesi sihlahla amandla (umshini uzochitha uphethiloli ngaphezulu 5-10 amaphesenti kunangaphambili). Enye inguqulo ezithakazelisayo firmware ukuba esikhundleni isikhathi ukuthungela ngesikhathi umkhonyovu. Auto-Tuning 2114 th "Lada" kuleli cala kusivumela sidlule ukumuncwa kobuhlungu uphethiloli nge ongaphakeme octane.
Noma kunjalo, iningi abashayeli ECU kabusha ulungise emandleni aphakeme. Ngenxa yalokho, umshini iba Overclocking ashukumisayo, ezemidlalo kanye nesivinini.
Kodwa ungakhohlwa mayelana amaphutha chip nokuhleleka okukhulu. Lokhu kunyuke qeda kwekhabhoni amagesi qeda nokwanda 5-10 amaphesenti ukugeleza kukawoyela. Ngeshwa, ubuchwepheshe bamuva ayivumeli ukusetha kabusha umshini ngesikhathi esifanayo aphansi ukugeleza rate nokusheshisa ashukumisayo okusezingeni eliphezulu. Kufanele umhlatshelo into eyodwa - zinjalo imithetho physics.
Zonke onobuhle Gaz: izici nesithombe
Isethulo Chery Crosseastar
SS20 dampers. Shock wezinciphisi ngoba Vaz
Ukwelashwa ultrasound: izici eziyinhloko